Wararki ugu danbeeyey ee Kismaayo iyo Shabab iyo Kenyanka oo magaalada iskula jira
Ciidamada Kenya iyo kuwa Dowlada ayaa gees uga jira magaalada Kismaayo, halka Al Shabab ay joogaan qeybaha kale oo ay difaacyo ka sameysteen.
Milatariga Kenya ayaa sheegay in ciidamo saarnaa afar ka mid ah maraakiibteeda dagaalka ay weerar ku qaadeen magaalada Kismaayo isla markaana qabsadeen dakada magaalada iyo xaafadaha u dhaw dhaw, sidoo kalana ay la wareegeen koontaroolka Kismaayo ee looga baxo dhanka magaalada Muqdisho.
Hase yeeshee Xarakada Al Shabab ayaa wali ku jiro gudaha magaalada Kismaayo iyadoo ay wali shaqeyneyso Radio Andalus oo ku hadasho codka Al Shabab, waxaa kale oo mararka qaar la maqlayaa rasaas.
Afhayeenka milatariga Kenya Col Cyrus Oguna ayaa u sheegay BBC-da in qeybo ka mid ah Kismaayo ay hada qabsadeen inta u dhimanna ay rajeynayaan in ay dhameystiraan sida uu hadalka u dhigay.
Col Oguna ayaa tilmaamay in howlgalkan ay iska kaashanayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada Soomaaliya, isla marklaana ay galeen xalay aacada Soomaaliya marki ay aheyd 2:00 ama sideed saac habeenimo.
“Wali wax qasaara ah ma sheegi karno dhibaatadana ma aanan tirin, laakin waxaan kuu sgeegi karaa in ciidamadeenu joogaan Kismaayo, wali waxaa jira meelo ay maamulayaan Al Shabab sababtoo ah halkaan mudo kooban ayaan joognaa,” ayuu yiri.
Bayaan kasoo baxay Midowga Africa ayaa lagu yiri: “Ciidamadayadu waxay u galeen magaalada si guul leh si ay u xoreeyaan shacabka reer Kismaayo uguna suura geliyaan nabadgalyo,”
Waxay ugu baaqeeen Midowga Afrca ciidamada Al Shabab ee ku harsan magaalada in ay hubka dhigaan.
Afhayeen u hadlay Al Shabab ayaa sheegay in maraakiibta dagaalka Kenya ay dib u celiyeen iminkana ay AL Shabab maamulaan magaalada.
Dadka ayaa ka cabsi qaba in magaalada uu ka dhaco dagaal, iyadoo arintuna u muuqato mid aanan ka maarmin in magaalada lagu dagaalamo cidi guuleysatana ay ka talin doonto.